दाङ राजधानी हुँदा बुटवललाई के बेफाइदा? – Tharuwan.com
दाङ राजधानी हुँदा बुटवललाई के बेफाइदा?
प्रकाशित : २०७७ असोज २५ गते ७:१५
संघीयता कार्यान्वयनको तीन वर्ष लाग्दै गर्दा प्रदेश ५ ले स्थायी राजधानी र स्थायी नाम पायो । गएको साता प्रदेश सरकारको संसदको दुई तिहाई मतले दाङको भालुवाङ राप्ती उपत्यकालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय गर्यो । भने, प्रदेशको नाम लुम्विनी कायम भयो ।
दाङमा राजधानी हुँदा वुटवललाई बेफाइदा के?
वुटवलबाट राजधानी दाङ सार्ने वित्तिकै वुटवललाई संकट आइलागेको, वुटवलको नामोनिसान हराएको जस्तो कोकोहोलो गर्नु भनेको संघीयता र स्थानीयता विरुद्धको अभ्यास हो । सबैकुरा आफ्नै घर आँगनमै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि संघीयता कमजोर भइरहेको छ । देशको समग्र विकास हुन सकिरहेको छैन । हिजो सिंहदरबारमा केन्द्रीत अधिकारले व्यक्ति विशेषको आधारमा राज्यको विकास भयो, जसले दुरदराजमा रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्न केही गर्न सकेन । सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र भुगोलको समान विकास गर्नकै लागि संघियता अपनाइएको हो भने, वुटवलबाट दाङ राजधानी सार्दैमा वुटवलवासीले राँको बाल्नु आवश्यक छैन ।
बाँकी तलको लिङ्कमा पढ्नुस्: